Dagaallamayaal ka tirsanaa Al-shabaab oo isku soo dhiibay DFS | KEYDMEDIA ONLINE
Dagaallamayaal ka tirsanaa Al-shabaab oo isku soo dhiibay DFS
Saddex qof oo ka tirsanaa ururka Al-shabaab ayaa isku soo dhiibay maamulka gobolka Gedo iyo taliska ciidanka xoogga dalka ee gobolkaasi.
Raggan is soo dhiibay ayaa kala ah, Maxamed Qani Shide Ibraahin oo watay Qori AK47 ah, Cabdiqadir Ibraahim Cabdullaahi oo watay Qori AK47 & , Cabdicasiis Maxamed Koosaar.
Saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee raggan soo bandhigay ayaa ugu horreyn sheegay iney ku faraxsan yihiin in dhallinyarada Soomaaliyeed ku baraarugaan qatarta Al-shabaab.
Taliyaha Ciidamada xasilinta Gobolka Gedo Bakaal Kooke, Taliyaha Ciidamada Sirdoonka Degmada Beled-Xaawo Cabdiqadir Xuseen Ibraahin & mas’uuliyin kale oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in raggan ay xiriir la soo sameeyeen mas'uuliyiin ku sugan Gedo.
Dhallinyaradan ayaa u sheegay dhankooda warbaahinta, in ay ka howlgeli jireen deegaannada Jubbooyinka iyo Gedo, balse ay haatan ogaadeen in waddo qaldan ku socdeen.
Al-shabaab oo baneystay dhiigga shacabka Soomaaliyeed ayaa dhallinyarada ku jiheeya waddo an sax ahayn, balse hadda dhallinyarada ayaa u muuqda kuwo ku baraarugay dhagarta kooxda, bilaabayna iney isaga soo baxaan.